Umaki: yenza kahle | Martech Zone
Elinye lamakhasimende esisebenza nalo linesikhathi sonyaka esifanelekile ebhizinisini labo. Ngenxa yalokhu, sithanda ukuhlela ukubuyekezwa kwemithombo yezokuxhumana kude kakhulu nesikhathi ukuze kungadingeki bakhathazeke ngokushaya lezo zinsuku nezikhathi ezithile. Iningi lamapulatifomu wokushicilela ezokuxhum ahlinzeka ngamandla okulayisha ngobuningi ukuhlela ikhalenda lakho lezokuxhumana. Njengoba i-Agorapulse ingumxhasi we Martech Zone, Ngizokuhamba ngenqubo yabo. Njengoba
Amafayela e-CSV anesisekelo futhi imvamisa iyinhlangano ejwayelekile kunazo zonke yokungenisa nokuthumela idatha kusuka kunoma yiluphi uhlelo. Sisebenza neklayenti njengamanje eline-database enkulu kakhulu yoxhumana nabo (amarekhodi angaphezu kwezigidi ezi-5) futhi sidinga ukuhlunga, ukubuza, nokuthekelisa ingxenye ethile yedatha. Liyini ifayela le-CSV? Ifayela lamanani ahlukaniswe ngokhefana yifayela lombhalo elihlukanisiwe elisebenzisa ikhefana ukuhlukanisa amanani. Umugqa ngamunye we
ULwesithathu, May 27, 2020 ULwesine, May 28, 2020 Douglas Karr
Abantu balithatha kancane inani lomuntu obhalisile. Nakhu ukwahlukaniswa kokuthi ungalinganisa inani kuphela, kepha ukuthi ungakuhlaziya kanjani ukugcinwa kohlu ukukhomba ukuthi ungawathola kuphi amakhasimende amasha nokuthi mangaki anokuhlaziywa kokugcinwa kohlu. Ishidi lokusebenzela lesampula lifakiwe!